Ị nwere ike ịme ka bọtịnụ ọjọọ blọọgụ ahụ site na ịbanye n'ime akaụntụ gị ma na ịpị n'ime mpaghara dị iche iche. N'ebe a ị ga-ehichapụ Dezie ma họrọ Ngosipụta Nhọrọ Di elu. Ozugbo ịhọrọla nhọrọ ahụ, nzọụkwụ ọzọ bụ ịpịgharịa ma gbochie njirimara ọjọọ niile. Pịa na bọtịnụ Kwadoro ma chekwaa mgbanwe niile gị tupu ịpinye na akaụntụ ahụ. Mgbe a na-egbochi bọọ ọjọọ ndị ahụ, na-esite na adreesị IP ndị na-ezighị ezi anaghị abụ akụkụ nke ebe nrụọrụ weebụ gị. IESG kwadoro atụmatụ nchebe ọhụrụ a na-ezube ime ka ebe nrụọrụ weebụ gị dị nchebe ma dị mma karịa mgbe ọ bụla. Enweghi ike imechi ya, ma ị nwere ike igbochi ọtụtụ adreesị IP dị ka ị chọrọ.